लण्डन। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले संस्थामा विधी विपरित अभिव्यिक्ती दिएको भन्दै एक सदस्यलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिकले रवि लामिछानेको सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रममा गएर सरकारले नेपाल सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य परिक्षण उपकरण र सुरक्षा सामग्रीहरुको खरिद गर्दा भ्रष्टचार गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि संघले कार्यवाही गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो । संघका प्रवक्ता […]
अमेरिकामा ग्याल्पो ल्होसार धूमधामकासाथ मनाइएको घ्याल्सुम्दो सेवा संस्थाकी अध्यक्ष निमा ल्हमोबाट जानकारी ! टोमा लामा, न्यूयोर्क,अमेरिका । हिमाली समुदायहरुको नयाँ वर्ष ग्याल्पो ल्होसार २१४७ औं जिवा ल्हो,मुसा वर्ग ल्होसारको अवसरमा शनिबार मार्च ७ तारिखका दिन घ्याल्सुम्दो सेवा संस्था अमेरिकाले अमेरिकामा नेपाली महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूत पुष्पराज भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा ग्याल्पो ल्होसार शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम”सम्पन्न गरेको छ । […]
काठमाडौँ — युभेन्टसका खेलाडी डानिएले रुगानीलाई कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को पुष्टि भएसँगै क्रिस्टियानो रोनाल्डो र गोर्डन राम्सेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । रुगानीसँगको सम्पर्कमा रहेको भन्दै रोनाल्डो र राम्सेलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो । कोभिड–१९ को पुष्टि भएसँगै रुगानीले भनेका छन्, ‘समाचार पढेर मेरो बारेमा चिन्ता लिनेहरुलाई म ठिक भएको विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। सबैले नियम मानिदिनुहुन […]
टोमा लामा, न्यूयोर्कः अमेरिका न्यूयोर्कमा फेब्रुरी २९, २०२० मा छिरीङ तोपग्यालको नेतृत्वमा वालुङ कम्युनिटीको लोसार कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा वालुङ कम्युनिटीका अध्यक्ष छिरीङ तोपग्याले टिबेट र नेपालको सिमानामा बसोबास गर्ने वालुङ समुदाय भएको दर्शाउनुभयो । जुन ठाउँ ताप्लेजुङ जिल्ला वालुङ गाउँपालिकामा पर्छ भन्नुभयो । त्यसै गरी वालुङमा एउटा ऐतिहासिक गुम्बा डिकी छ्योलिङ भएको जुन […]
एजेन्सी । कोरोना भाईरस अर्थात् कोभिड १९ को प्रकोपले विश्व नै त्रसित भईरेहका बेला उत्तर कोरियामा पनि यसको संक्रमण भयानक देखिएको छ । उत्तर कोरियाली समाचार संस्था ‘डेली एनके’ मा प्रकाशित समाचारका अनुसार उत्तर कोरियाका लगभग २ सय जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ३ हजार ७ सयलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। डेली एनकेले दाबी गरेअनुसार […]
बेलायतमा स्वास्थ्यमन्त्री तथा संसद सदस्य नादिन डोरिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छ । उनले आफूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भए लगत्तै सबै सल्लाहलाई मानेको र घरमै आइसोलेसनमा बसेको बताएकी छिन् । बेलायतमा कुल ३८२ मा कोरोना संक्रमण भएको र ६ जनाको मृत्यु भएको समाचार आइरहँदा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै कोरोना संक्रमणको पुष्टी भएको हो । उनी […]
साबुनले हात धुँदा कोरोना भाइरसलाई के हुन्छ ? – उत्तमबाबु श्रेष्ठ
कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) भाइरस मुख्यत तीन तत्वहरू: अारएनए, प्राेटिन र लिपिड (एक प्रकारकाे बाेसाे) मिलेर बनेको सुक्ष्म कण (एक इन्चलाइ दशलाखले भाग गर्दा जति अाउँछ लगभग त्यत्राे साइजकाे) हो । यहाँ फाेटाेमा देखाएकाे जस्तै । यसकाे वाहिर अावरणमा लिपिड (बाेसाे) हुन्छ । अारएनएले भाइरसकाे अनुवंश (जीन) प्रसारित गर्दछ, जसरी मानिस वा अन्य जनावरहरूमा डिएनएले […]
ईटालीमा कोरोना भाईरसबाट मर्नेको संख्या बढेको छ । आईतबार मात्र १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यो देशमा अहिलेसम्म ३ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको ईटालीको सरकारी निकायले जनाएको छ । ईटालीमा अहिलेसम्म कुल ७हजार ३७५ जनामा यो भाईरस देखिएको छ । सम्वन्धित खबर :साथी बाल्टिमोरले मेरिल्याण्डमा मास्क बाढ्दैएनआरएनएको […]
Page 1 of 4012345...122436...»Last »